Fiakaran’ny taxi-be ho 500 Ar : raikitra ny totohondry, voadaroka ny “receveur” | NewsMada
Fiakaran’ny taxi-be ho 500 Ar : raikitra ny totohondry, voadaroka ny “receveur”
Kaoperativam-pitaterana 14 amin’ny 62 ao amin’ny UCTU, omaly, no nampihatra ilay fiakaran’ny saran-dalan’ny taksibe ho 500 Ar. Anisan’ireny ny zotra 133, izay niteraka savorovoro, niafara tamin’ny totohondry izany. Voadaroka ny “receveur”.
Nisy nampiakatra saran-dalana ho 500 Ar ny sasany amin’ireo zotra eto Antananarivo omaly, araka ny hita nandritra ny tontolo andro. Singanina amin’ireny ny zotra 119 (67 ha-Ankatso), 128 (Ankatso-Ambanidia-Mahamasina), 133 (Itaosy-Analakely) samy zotra be mpandeha avokoa. Nampiakatra izany ho 500 Ar ny kaoperativa 14 amin’ireo 62 mpikambana ao amin’ny UCTU. Nijanona ho 400 Ar ihany kosa ny sasany saingy tsy misy tapa-dalana intsony. Ho an’ny taxi-be miakatra eny amin’ny La Haute Ville, miakatra 500 Ar saingy mijanona 400 Ar kosa rehefa midina aty Analakely.
Efa nisy ihany ny fampilazana mialoha nataon’ireo taxi-be tamin’ny alalan’ny taratasy milaza ny fiakaran’ny saran-dalana nanomboka omaly. Na teo aza izany, tsy nanaiky ny mpandeha sasany fa 400 Ar ihany no naloan’izy ireo. Vokany, raikitra ny fifanjevoana teo amin’ny mpandeha sy ny receveur-n’ny taxi-be 133 teny Andranonahoatra Itaosy, omaly tolakandro. Tsy nety nandoa 500 Ar ny mpandeha rehetra tao anaty fiara fa niray hina fa hoe samy tsy handoa 500 Ar fa 400 Ar ihany. Nodarohin’ny mpandeha ilay receveur. Tsy afa-nanoatra, araka izany, ilay receveur sy ny mpamily manoloana ireo mpandeha nentin-katezerana. Nanaiky tsy fidiny ary nijanona tamin’ny 400 Ar ihany ny saran-dalan’ireo mpandeha tamin’ilay taxi-be 133 ity. “Na miakatra aza ny vidin-tsolika, tsy maty antoka ny taxi-be na mijanona 400 Ar aza io saran-dalana io. Noho izany, tsy hanaiky izany saran-dalana 500 Ar izany mihitsy izahay”, hoy ireo mpandeha.
Nisy taxi-be amin’ny zotra 133 indray tsy nanondrotra ny saran-dalana, saingy nihodina tany amin’ny Cnaps Anosy fa tsy tonga teny Analakely intsony, araka ny fitarainan’ny mpandeha sasany vao maraina, omaly.
Tsy voahaja ny bokin’andraikitra…
Ny tompon’ny taxi-be hafa, mbola miandry ny toromarika avy amin’ny tomponandraikitry ny UCTU sy ny UCTS momba ny fampiakarana na tsia ny saran-dalana. Efa nanamarika anefa ny filohan’ny UCTU fa tsy maintsy hiakatra ny saran-dalana indrindra nisondrotra ny talata alina teo indray ny vidin-tsolika teto amintsika. Maro tamin’ireo taxi-be niasa omaly, tsy nanaiky saran-dalana tapa-dalana intsony vokatry ny fisondrotry ny vidin-tsolika, saingy nijanona ho 400 Ar ihany ny saran-dalana.
Nanamarika ny mpiandraikitra ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety (ATT) ny herinandro lasa teo, fa hotapahan’ny fanjakana ny vola fanampiana omeny ho an’ny fiara taxi-be manondrotra ny saran-dalana ho 500 Ar izy ireo.
Tsikaritra anefa fa tsy mifanaraka amin’ny tolotra homena ny mpanjifa ny fiakaran’ny saran-dalana ho 500 Ar. Manginy fotsiny ny tsy fanajana mpandeha, toy ny familafilana amin’ny alalan’ny fihodinana tapa-dalana. Tsy mety mandeha intsony rehefa feno ny “versement”. Tsy lazaina intsony havoretran’ny mpamily sy ny receveur indrindra ny haratsin’ny fiara ampiasaina. Be tsy andraofana fotsiny ireo taxi-be eto amintsika. Tsy terena fa afaka mijanona rehefa tsy hanaraka ny voalazan’ny bokin’andraikitra.
Jean Claude sy Vonjy A.